के सम्भवतः स्थायी ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न सम्भव छ?
यदि तपाइँ यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ भने, सम्भवतः तपाइँ प्राय: तपाइँका वेब स्रोत, ब्लग, आलेखमा थप ट्राफिक उत्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ।. यो लेख विशेष गरी ती व्यक्तिहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ जुन कुनै पनि प्रतिशत खर्च नगर्न स्थायी ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न चाहन्छ. तथापि, तपाईलाई थाहा छ कि उच्च PR ब्याकलिङ्कहरू निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नाले धैर्य र कडा परिश्रम गर्नेछ. यदि तपाइँ कुनै पनि प्रयास बिना सान्दर्भिक र उच्च पीआर ब्याकलिङ्कहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईले यो सामग्री टुक्रा आवश्यक पर्दैन, के तपाइँ?
आउनुहोस् पहिला ब्याकलिङ्कहरूको बारेमा केहि शब्दहरू र ट्राफिक उत्पादनको लागि उनीहरूको महत्त्व भन्छ. सामान्यतया, ब्याकलिङ्कहरू के हुन्छ जब एक वेब स्रोत अर्कोसँग लिङ्क हुन्छ. यसले धेरै सरल काम गर्दछ. सबै भन्दा पहिले, गुगल बट एक स्रोत को पार्स गर्दछ जहाँ इनबाउन्ड लिङ्क राखिएको छ. तिनीहरू यस स्रोतमा आधारित सामग्रीको प्रासंगिकता र गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्छन्. यसबाहेक, खोज ईन्जिनियरिङ्लाई वेबसाइट पेजअधिकृतता र पेजरङ्क र साथमा आगमन आवागमनको मात्रा र गुणस्तरमा ध्यान दिनुहोस्. एकपटक यो अनुसन्धान गरेपछि, क्रलररहरू छिट्टै खोजी लिङ्क गरिएको वेब स्रोतमा एक नजर राख्नुहोस् कि एक लिङ्क प्रासंगिक र विश्वसनीय हो भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।. यो डेटा मान्न, Google लाई जोडिएको वेबसाइट बढाउनको लागी नोट बनाउँछ अर्को चोटि यसको वरिपरि यो क्रल हुन्छ.
यसैले अधिक ब्याकलिङ्कहरू थप ट्राफिकको अर्थ र पछि उच्च वेबसाइट रैंकको अर्थ हो. आफ्नो ट्राफिक ट्राफिकमा नयाँ ग्राहकहरू हो जसले तपाईंको अनलाइन व्यापारमा पैसा ल्याउनेछ. त्यसोभए, हामी भन्न सक्छौं कि ब्याकलिङ्कले तपाईंलाई पैसा र लगानीमा उच्च फिर्ती ल्याउँछ.
स्थायी स्थायी लिंकहरू खरिद गर्न उचित छ?
धेरै वेबमास्टरहरूले ब्रान्ड सुधारको प्रक्रिया छिटो गर्न ब्याकलिङ्कहरू खरीद गर्न निर्णय गर्छन्. तथापि, तपाईले त्यसमा एक ब्याकलिङ्क खरिद गर्नको लागि एक विशेषज्ञ हुनु आवश्यक छ जुन तपाईंको साइटमा मूल्य ल्याउन सक्छ. अन्यथा, तपाई फर्किनु हुँदैन वा चीजहरू खराब गर्न सक्नुहुनेछ.
त्यहाँ धेरै धोखाधडी एसईओ विशेषज्ञहरू छन् जुन "उच्च पीआर" वा "उच्च मूल्य" ब्याकलिङ्कहरू भनिने वादा गर्ने प्रतिज्ञा गर्छन्।. यस्तो खरिदहरू खरिद गर्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो पैसा बर्बाद गर्नुभयो. किनकि यदि पाना लिङ्क वेब स्रोतबाट उच्च पृष्ठको श्रेणीमा छ भने, यसको अर्थ भने यदि तिनीहरू तपाईंको साइटसँग सम्बन्धित छैनन्. यसबाहेक, Google ले खरिद लिङ्कहरू सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ र खरीददार र विक्रेता दुवै दण्डित गर्न सक्दछ.
त्यहाँ कुनै पनि संदेह छैन कि केहि सेवाहरू तपाईंको लिंक धेरै उच्च गुणस्तरबाट प्राप्त हुनेछन्. तिनीहरूले भुक्तानी गर्न को लागी तपाईलाई धेरै ब्याकलिंकहरू बनाउन सक्नुहुन्छ. यद्यपि, त्यहाँ एक रोचक घटना हो, जितनी नै तपाईंले आफ्नो सेवाको लागि भुक्तानी रोक्न, लिङ्क जुन तपाईको साइटमा निर्माण गरिएको थियो हटाइने छ।. यसैले भुक्तानी ब्याकलिङ्क खोज इन्जिनबाट ट्राफिक प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका होइन.
स्थायी लिङ्क प्राप्त गर्ने अन्य तरिका के हो?
तपाईले आफैले ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो सम्बन्ध सम्बन्धी सम्बन्ध सम्बन्धी सम्बन्ध सम्बन्धी वेब स्रोतहरूसँग. वा यदि तपाईं पछाडी जानुहुन्छ भने पूर्ण-समय एसईओ कर्मचारीलाई सही तरिकाले ब्याकलिंक बनाउनुको लागि भाडा लिन सक्नुहुन्छ. यो तपाईं अन्य साइटहरूमा अवलोकन गर्न यी सौदा ब्याकलिङ्कहरू भन्दा धेरै अधिक खर्च गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तर तिनीहरूले तपाइँको वेबसाइट धेरै लामो समयको लागि SERP पृष्ठमा राख्नेछन्। Source .